Izindaba - Aluminium foil tapes ongakaze uwasebenzise
Uma kukhulunywa nge-aluminium foil tape, ngikholwa ukuthi sonke kufanele siyijwayele, njengoba kungabonakala kakhulu esigabeni sezinto zasendlini.
Okokuqala, i-aluminium foil tape yenziwa nge-adhesive enhle ezwela ingcindezi, kanye nezici ze-aluminium foil ukumelana nokushisa okuphezulu, okungenakulinganiswa, ngakho-ke kunomphumela omuhle kakhulu wokuvikela, kepha futhi kunezinto ezibonakalayo, empilweni yethu, kuhhavini, ku-microwave kuhhavini kuzosetshenziswa. Vele, kunezicelo eziningi embonini yezimoto.
Ngezansi uzothola ezimbalwa imikhiqizo eyinhloko ye-aluminium foil.
(A) I-tape eyenziwe nge-aluminium foil ejwayelekile
Lo mkhiqizo umkhiqizo ovamile emakethe, i-viscosity enhle, ukwahlukanisa okuhle, umsebenzi wokuvikela i-electromagnetic. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukuvikela i-electromagnetic yezinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo ye-elekthronikhi, nokufakwa okushisayo kwezinto zasendlini nezentengiselwano.
(B) Iteyipu yefoyili ye-aluminium eyodwa futhi emaceleni amabili ngokuqiniswa
Lo mkhiqizo uyinto ehlanganisiwe enengilazi yefayibha yokuqinisa phakathi kwephepha le-aluminium nephepha le-kraft, elinemisebenzi ejwayelekile ye-aluminium foil tape, kodwa futhi engenamanzi, isikhunta-proof kanye nokushisa okushisa. Isetshenziselwa ukufakwa kwepayipi, ukuvikelwa kwangaphandle kwemishini yokushisa nokupholisa, nokufakwa kokushisa kwezakhiwo namahhotela.
(C) Ingilazi yefreyili yengilazi yefayibha
Lo mkhiqizo wenziwe nge-aluminium foil nengilazi yefayibha yendwangu ngemuva kokuhlanganiswa okunamathelayo, ngokusebenza okuhle komgoqo wamanzi, ukusebenza kwe-anti-oxidation, i-asidi ebuthakathaka nokumelana ne-alkali, ubufakazi bokuqhuma kanye ne-flame retardant. Isetshenziselwa ukubeka uphawu amapayipi nokwakha izingqimba ezibonisayo ezinhlelweni zikagesi zokushisa phansi.
(D) I-Flame retardant aluminium foil tape
Isigaba esiyinhlanganisela ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi tape nge-pure aluminium ucwecwe njengezinto eziyisisekelo, i-glue yelangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi, bese kuthi ngokusebenza okuhle kakhulu kumhlophe abicah ukuhlukaniswa kwephepha njenge-liner composite. Ngamandla aphezulu ekhasi, ukunamathela okuhle kokuqala, ukuhlangana, izakhiwo ezinhle kakhulu zelangabi. Ifanele amapayipi omoya, izindonga, nokufakwa kwensimbi, kanye nokufakwa kwemoto nezitimela, ukufakwa kwepayipi lomkhumbi, njll.
(E) upende omnyama we-aluminium tape tape
Ukuze abasebenzi abasebenza endaweni ende yokusebenza esweni lomuntu ngeke bazizwe bekhathele, ubuso busebenzisa ukumbozwa okumnyama. Inemisebenzi yokufakwa kokukhanya, ukumuncwa komsindo, ukufakazela umswakama, anti-corrosion, ukufudumeza ukushisa, ukulondolozwa kokushisa, ukuvimbela ilangabi, njll. Ikakhulu kudlala indima yokuvikela umsindo kumahholo edili nasemahholo ekhonsathi.
(F) Iteyipu yefilimu eyenziwe nge-Aluminium
Lo mkhiqizo umbozwe ungqimba lwe-aluminium foil kwifilimu, ukufudumeza okushisayo, i-anti-corrosion, i-electromagnetic shielding, izakhiwo eziqinile zokuqina. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukuhlobisa kwangaphakathi, ukuphrinta kwemboni nezinye izindawo.